Ifektri yedeskithophu - Abenzi beDeskithophu baseChina, abahlinzeki
Isihlanzimoyeni / Ideskithophu / AP-D01
Isihlanzisi somoya esihle sakhiwe ngesihlungi se-HEPA kanye nesihlungi sangaphambilini, sithwebula izinhlayiya eziyingozi namagesi afana ne-PM2.5, uthuli, impova nentuthu, okukukhulula kokunye okungaba yingozi. Futhi kulandelwa ukuminyana okuphezulu ama-ions ayi-8 million pcs / cm³ukuhlanza isikhala kabili, ukubulala uthuli oluyingozi, impova kanye nentuthu emhlabathini nomoya omusha, kukwenze uhlale ehlathini, unciphise izinzwa nokungezwani. Isebenzela igumbi lama-20m³. Ungayibeka egumbini lakho lokufundela, igumbi lokuphumula, igumbi lokulala noma ehhovisi.
Isebenza njengesihlanganisi sokudumisa futhi, ngenkathi ihlanza umoya iyasiza ukumanzisa umoya owomile, ithambisa isikhumba sakho, ikwenze ungabi neguliswa kakhulu. Kuyasiza impela ekwindla, ebusika nasentwasahlobo elula yokungezwani komzimba, futhi kuyasiza nasemakamelweni e-AC omile ehlobo. Impela ikwenza ube sendaweni enethezekile imini nobusuku kuzo zonke izinkathi zonyaka.
Idizayinelwe ngemibala engu-7 yemibani ehlukile, idala umoya ojabulisayo, uzozizwa unethezekile futhi uphumule, kanye nomklamo wayo omuhle, kungumhlobiso omuhle wendlu yakho noma wehhovisi lakho. Futhi ebusuku kusebenza njengokukhanya ebusuku ngokukhanya okumhlophe okuthambile, kukusize ekufundeni okuthile, uvikele amehlo akho.
Akuyona into yokuhlanza umoya kuphela, isebenza ngaphezu kwalokho. Futhi kuyinto enhle ebhizinisini lokuphromotha ukukhuthaza izinhlobo. Izinhlangothi ezi-4 inendawo eningi engenalutho ukwethula ama-logo. Ngemisebenzi yayo esebenzayo, ikhwalithi ebekezelelekayo futhi yakhelwe okuhle, izowina amathuba amaningi ebhizinisi.
Isihlanzimoyeni / Ideskithophu / AP-D02
Le modeli yomoya wokuhlanza ihlanganisa ukuhlanzwa kwesihlungi se-HEPA nokuhlanzwa kwekhabhoni okusebenzayo ukuhlanza isikhala sakho. Isihlungi se-H11 HEPA kanye nesihlungi sangaphambi kokuthwebula kahle izinto eziyingozi emoyeni ezifana ne-PM2.5, uthuli, intuthu nempova, zikukhulula ekuthimuleni, ekucinaneni nakwezinye izimpawu zokungezwani komzimba ezibangelwa ukungcola okuvela emoyeni. Ukuhlanzwa kwesendlalelo sesibili isikhutha esisebenzayo kususa ukusongela kwamakhemikhali okuyingozi njenge-formaldehyde, i-benzene, i-VOCs, futhi kususe nephunga elibi. Uma ungumnikazi wesilwane, kusiza ubungozi besilwane futhi kumunca iphunga lesilwane, kukuvumela ukuthi uthokozele isilwane futhi ukhululeke ezingxenyeni zaso ezimbi. Isebenzela igumbi le-10m³- 20m³.
Njengoba ukwazi ukubona ukuthi ihlukile futhi iyathandeka, kuyinsimu encane yezitshalo zakho ozithandayo ezinganisela ukukhula kwamanzi. Futhi ungagcina ezinye izinhlanzi. Ingadi encane yasendlini futhi umhlobiso omuhle wendawo yakho yokuhlala. Inamalambu aluhlaza okwesibhakabhaka emini namazinga ahlukene wokukhanya amalambu amhlophe ebusuku, okwenza isikhala sakho sithandane futhi sithokomele. Izibani zingakusiza ekufundeni kwakho ebusuku obumnyama, okulungele amehlo akho. Ungayibeka ekhishini, ekamelweni lokulala, ehhovisi noma kwenye indawo oyifunayo.
Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-ABS, uzobona ukuthi inombala omhlophe omuhle futhi onethezekile, futhi ubekezelela kakhulu, uma uwe phansi usuka kubude obungu-10m ngeke kube khona okulimazayo. Ngakho-ke ungakhathazeki uma ngokungazi ulenza liwele phansi. Kuyinto yokusebenza okuhle komndeni ukwenza impilo yakho ibe yimpilo futhi ijabule.
Khulisa i-Lightin, Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Khulisa ukukhanya,